Diyo post :: नाका खुलेको तीन महिना भयो, ग्यास पाइएन भनेर मलाई गाली गर्ने कि सरकारलाई ? नाका खुलेको तीन महिना भयो, ग्यास पाइएन भनेर मलाई गाली गर्ने कि सरकारलाई ? - Diyo post
नाका खुलेको तीन महिना भयो, ग्यास पाइएन भनेर मलाई गाली गर्ने कि सरकारलाई ?
अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धन पुनः आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । नयाँ संविधानले विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नगर्ने देखेपछि मधेस निकै समय आन्दोलित भयो, तर आन्दोलनबाट ठोस उपलब्धि नभएको आन्दोलनकारीकै निष्कर्ष छ । यसै सन्दर्भमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग दियो पोस्टकर्मी सुदीप विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पछिल्लो समय मधेस भनेकै आन्दोलनको क्षेत्र भन्ने बुझिएजस्तो आभास हुन्छ, यस्तो किन ?
पछिल्लो समयको मधेस आन्दोलनको कारण संविधान नै हो । जसरी मधेसलाई बेवास्ता गरेर नयाँ संविधान आयो, त्यसले स्वाभाविक रुपमा आन्दोलन निम्त्यायो ।
यसअघि ०६४ सालमा मधेस आन्दोलन भयो, ५४ जना सहिद भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमाले र माओवादीको सहमतिमा मधेसी मोर्चासँग आठबुँदे सम्झौता गरे, १६ फागुन ०६४ मा । त्यो सम्झौतामा मधेस स्वायत्त प्रदेश, समावेशी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सेनामा प्रवेशलगायत बुँदा थिए ।
मधेसका समस्यालाई पहिलो संविधानसभाले सम्बोधन गर्छ भनेर लिखित सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग पूरा भयो ।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेन । दोस्रो संविधानसभाले विगतका सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा हालिदियो ।
विगतको सम्झौताअनुसार सीमांकन गरिएन । मधेस प्रदेश, थरुहट प्रदेश दिइएन । समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व लगायत कुरालाई सम्बोधन गरिएन । मधेसलाई बेवास्ता गरेर संविधान बनाइयो, घोषणा गरियो ।
५४ जना सहिद भएर गरिएको सम्झौता लागू नभएपछि मधेसमा पुनः आन्दोलन र विद्रोह हुनु स्वाभाविक हो ।
उत्पीडित जनताले अन्तरिम संविधानबाट केही खास अधिकार पाएका थिए, त्यसलाई पनि नयाँ संविधानले खोसिदियो । पाएको अधिकार गुमेपछि मधेसले लड्नुको विकल्प थिएन । त्यही पृष्ठभूमिमा मधेस आन्दोलन भयो । आन्दोलनअघि हामीले संविधानसभाभित्रै संघर्ष ग¥यौं । तर, हाम्रो आवाज नसुनी संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइयो, हाम्रो धैर्यताको बाँध टुट्यो र सडकबाट आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
मधेसले पहाडलाई बुझ्ने या पहाडले मधेसलाई बुझ्ने सवालमा समस्या थियो कि ?
कोइराला, ओली र दाहाल जो राजनीतिक केन्द्रमा थिए, छन्, उनीहरूको चिन्तन नश्लीयताबाट मुक्त छ भन्न सकिँदैन । सबै बाहुनलाई गाली गरेर पनि हुँदैन । तर, राज्य संयन्त्र, राजनीतिमा उनीहरूकै वर्चस्व छ र त्यसले नदेखिने गरी चिन्तन गर्छ, जसले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, जातिलाई उपेक्षा गर्छ, यसैले समस्या पारेको हो ।
यसमा बुझाइमा भन्दा पनि नियतमै समस्या छ । शासक वर्गको नश्लवादी सोच र चिन्तनकै कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । एउटा नश्ल, जो खसवादी मानसिकता बोक्छ । सबै खसहरूलाई भन्न खोजिएको होइन । तर, नश्लीय चिन्तनको प्रभाव देखिन्छ । मधेसीलाई अधिकार दिनै हुन्न, पाएको अधिकार पनि खोसिदिनुपर्छ भन्ने नियतले काम गरेको देखिन्छ । मधेसी, जनजाति, दलितले अधिकार नपाएपछि त्यस्तो नश्लीय चिन्तनविरुद्ध संघर्ष अनिवार्य थियो र छ ।
पछिल्लो आन्दोलनमा कुनै नौलो माग थिएन, विगतका सम्झौताकै कुरा थियो । तर, विगतका आन्दोलनले प्राप्त गरेका अधिकार खोसिनुमा प्रत्यक्ष भूमिका नश्लीय चिन्तन नै देखिन्छ ।
वर्षौंदेखिको विभेद कायम राख्ने चिन्तनविरुद्धको संघर्ष थियो हाम्रो । हिमाल, तराई, पहाड वा उत्पीडित जातिले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । एउटा नश्ल भएको मान्छे मात्रै नेपाली होइन । सबै नश्लका सबै मान्छे नेपाली हुन् ।
तपाईंले भनेको नश्लवादी चिन्तन के हो ?
पछिल्लो मधेस आन्दोलनले के गर्‍यो ?
यो आन्दोलनले मधेस र मधेसीको पहिचान र समस्यालाई देश र दुनियाँमा स्थापित गर्यो । दुनियाँले मधेसी भनेका को हुन् भन्ने बुझ्यो । नत्र मधेसीको अनुहार भारतसँग मिल्छ भन्ने बुझाइ थियो । खसवादीहरूले यी सबै भारतीय हुन् भन्थे । अहिले बल्ल दुनियाँले बुझे, मधेसी भनेका नेपाली हुन्, नेपाल आमाका सन्तान हुन् भन्ने ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा मधेस आन्दोलनले रुप लिएको हो । मधेसीका माग पूरा नगरेको नयाँ संविधानप्रति अन्य राष्ट्रले पनि असहमति जनाए । युरोपियन युनियनदेखि लिएर सारा शक्तिशाली राष्ट्रले हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । नयाँ संविधानले मधेसी, दलित, जनजातिले अधिकार पाएनन्, उनीहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ, वार्ता हुनुपर्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।
तपाईंहरूलाई मधेसको मात्रै मुद्दा उठाएको आरोप छ नि ?
यहाँ हिमाल, पहाड, तराई÷मधेसमा धेरै नागरिक विभेद र उत्पीडनमा छन् । पहाडका दलित, जनजाति, महिलामाथि पनि शोषण भएको छ । आर्थिक रुपले धेरै ठूलो शोषण कायम छ, खस आर्य समुदायभित्र पनि अनेक विभेद छन्, वर्ग छन् । तर सबैभन्दा ठूलो शोषण मधेसलाई गरियो । मधेसीको अनुहार हेर्नेबित्तिकै यो त विदेशीजस्तो भनेर व्यवहार गरिदिने र अस्तित्वमाथि खतरा पैदा गरिदिने गरिएको छ । मधेसी हाम्रो पहिचान हो । सुरु–सुरुमा अपमान गर्ने हिसाबले हामीलाई मधेसी भनिन्थ्यो । जब मधेसवादीहरू स्थापित भए, अनि गर्वका साथ मधेसीले आफ्नो पहिचानलाई स्वीकार गरे । त्यसकारण मधेसी हुनुमा गर्व छ । हामी यो देशका धर्तीपुत्र हौँ, यो देशका सच्चा नेपाली हौं । नेपालको राष्ट्रियताको लागि मधेसमा आन्दोलन भयो । मधेसीको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाइयो ।
तपाईंको नागरिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ त ?
मधेसका जनताले राष्ट्रियताका लागि आन्दोलन गरे, सबै मधेसीको प्रश्न उठ्यो, म त मधेस आन्दोलनको नेता हुँ, मधेसी हुँ । ममाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेतालाई नै गाली गरेपछि, प्रश्न उठाएपछि पुग्छ भन्ने ठानेर यस्तो गरियो ।
हामी कुमाई गढवाल, राजस्थानबाट आएका होइनौँ । दार्जिलिङ, देहरादुन र भूटानबाट आएका होइनौं । हामी धर्तीपूत्र हौं ।
पहिलो संघर्ष मधेसले उसकै विरुद्ध गर्नुपर्यो, जसले उसलाई नेपाली मानेन । ०४० सालदेखि मधेस आन्दोलन सुरु भएको हो । सद्भावना पार्टीको उत्पत्ति नै त्यतिबेला भएको हो, जब हर्कबहादुर गुरुङले मधेसीलाई भारतीय नागरिक बनेर प्रतिवेदन लेखे, त्यहीँदेखि समस्या भएको हो । पञ्चायतकालमै मधेसीको परिचयमाथि ठूलो घात भएको थियो । गजेन्द्र नारायण सिंहले सद्भावना पार्टी गठन गर्नुभयो । त्यतिबेला मधेसमा नागरिकता लिने चलनै थिएन । खालि सरकारी जागिरका लागि नागरिकता चाहिन्थ्यो । सरकारी जागिर मधेसीलाई दिइँदैन थियो । अनि मधेसीलाई किन नागरिकता चाहियो ? हर्कबहादुर गुरुङ रेकर्ड हेर्न गए । मधेसीले लिएकै थिएन । अनि सबै भारतीय भनेर लेखिदिए । हामी कुमाई गढवाल, राजस्थानबाट आएका होइनौँ ।
दार्जिलिङ, देहरादुन र भूटानबाट आएका होइनौं । हामी धर्तीपूत्र हौं । ५० वर्षअगाडि ६ प्रतिशत पहाडी रहेको मधेसमा अहिले २६ प्रतिशत पुगेको छ । तर, मधेसमा मधेसीको बस्ती थियो । जति प्रतिशत भए पनि सद्भावपूर्ण तरिकाले बसिरहेका छौं । त्यही धर्तीमा गएर बस्ने अनि उल्टै त्यहाँका धर्तीपुत्रलाई विदेशी भन्ने ? त्यसकै विरुद्धमा संघर्ष सुरु भएको हो । ०४७ सालमा सद्भावना पार्टी बनेको थियो । त्यसले पहिलो लडाइँ नै अस्तित्वका लागि लडेको हो । नागरिकताका लागि लड्यौं, अनि कानुन बन्यो । हामीले नागरिकता पायौं ।
मधेस आन्दोलनमा मुठीभर जमिनदारको सत्तास्वार्थ रहेको आरोप लाग्दै आएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो आरोप फुटाऊ र शासन गर भन्ने शासक वर्गकै सोचको उपज हो । हामीले समानुपातिक अधिकार पाउनुपर्छ भनेर भनेका हौं । मधेसभित्र पनि दलित, जनजाति, मुस्लिम र थारु लगायत समुदाय शोषणमा परेका छन् । सबैले अधिकार पाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं । जसरी पहाडमा हुनेखाने र उच्च जातिको राज्य संयन्त्रमा हालिमुहाली छ, दलित र जनजातिका अधिकार खोसिएका छन् । बाहुनहरू पनि गरिब छन् । पहाडमा पनि समान अधिकार छैन । तर, हामी सारा मधेसी राज्यबाट शासित छौं ।
मधेसी नेताबीच पनि सत्ताका लागि मतैक्यता नभएको देखिन्छ नि ?
विगतदेखि नै यो कुरा उठेको छ, खासगरी संविधानसभाको निर्वाचनपछि यस्ता कुरा आए । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि मधेसवादीहरू सत्तामा गए । पार्टीहरू पनि सत्ताकै लागि टुटफुट भए । त्यसकारण प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक नै हो । हामीले सडकमा लड्यौं, संसदमा पनि लड्यौं र सरकारमा पनि गएर लड्नुपर्छ भनेर योजना बनाएका थियौं । तर त्योअनुसार भएन । सरकार वा सत्तामा गएर पनि बद्नामीबाहेक केही हुन सकेन । सरकारमा हामी मात्रै थिएनौँ, अरु पनि थिए, सत्ताको जालझेल हामीले बुझेनौँ ।
म आफैँ मन्त्री हुँदा मधेसका लागि बोल्दा ‘किन बोलिस्, आफैँ मन्त्री भएर मधेसका लागि बोल्ने ?’ भनेर मलाई भनियो । बोलीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइँदो रहेछ, सत्तामा ।
अनि, मेरो पुत्ला जलाइयो । त्यहाँ पनि संघर्ष गर्ने प्रयास त गरियो, तर पूरै छुटका साथ संघर्ष गर्न पाइँदो रहेनछ । र, ती चार वर्ष हाम्रा लागि उपलब्धिमूलक रहेनन्, बद्नामीमूलक रहे ।
हामी बिल्कुल एकमत छौं । नयाँ गठबन्धनमा मैले केही मत राखेको छु । हिमाल, पहाड तराई र मधेसका उत्पीडित जनताको राष्ट्रिय आन्दोलन बनाउनुपर्छ भनेको छु । य
मधेसी मोर्चा जो ८ वर्ष अघिदेखि सक्रिय छ, सरकारसँग सम्झौता पनि मोर्चाले नै गरेको हो । त्यसकारण मधेसी मोर्चाको अस्तित्वलाई समाप्त गर्न हुन्न ।
तपाईंहरू सरकारमा जानु नै कमजोरी भयो ?
हो, कमजोरी भयो । अधिकारका लागि त्यो ‘प्लेटफम’ उपयुक्त नहुँदो रहेछ ।
मैले आन्दोलनलाई टिकाएको हुँ । मेची महाकालीसम्म दौडिने मै हुँ । लाठी खाने मै हुँ । ज्यानको बाजी पनि लगाएको हुँ । आन्दोलनमा जनता लाठी खाने, नेताचाहिँ काठमाडौं बसेर चिया–कफी खाने ? त्यसरी आन्दोलन हुन्छ ?
नयाँ संविधानले मधेसलाई कसरी उपेक्षा गर्यो ?
हामीले विगतका आन्दोलनबाट पाएको अधिकार पनि खोसियो । नयाँ संविधानले हामीलाई ५० वर्षपछाडि धकेलेको छ । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभामा २४० सिटमा ११६ सिट मधेसले पाएको थियो । तर, यो संविधान बन्दा त्यो पनि खोसियो ।
अन्तरिम संविधानले प्रहरी, सेना लगायत सबै क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गरेको थियो, ती हक पनि जालझेलपूर्ण तरिकाले संशोधन गरियो ।
१७ वटा क्लस्टर बनाइयो । त्यसमा वञ्चितलाई दिनुपर्ने अधिकार कस्तो हुने भन्ने गोलमाल भयो । राज्यसभामा ५० लाख जनसंख्या भए पनि ८ सिट ५ लाख जनसंख्या भए पनि ८ सिट ? यो लोकतन्त्रमा हुँदै हुँदैन । त्यतिमात्रै होइन, मधेसको भारतसँग बिहेवारीको सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै रहँदै आएको हो । त्यो सम्बन्धमाथि संविधानले प्रहार गरिदियो । नागरिकता र अधिकार पाउने सवाललाई गुल्ट्याइदियो ।
यस्तो प्रतिगामी संविधान बनाइयो, जसलाई कसैले स्वीकार गरेन । दुईतिहाइ जनताले यो संविधानलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
मधेस आन्दोलनलाई नै भारतसँग जोडेर टीका–टिप्पणी हुने गर्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
नेपालमा खोक्रो राष्ट्रवाद हाबी छ, भारतका विरोधमा आधारित राष्ट्रवाद छ । मधेसीलाई गाली गर्ने राष्ट्रवादी चिन्तन छ, जो राष्ट्रवादी चिन्तन हुन सक्दैन । राष्ट्रवादी भनेको मुलुकलाई माया गर्ने, मुलुकको समृद्धि चाहनु हो । तर हाम्रोमा अरुलाई गाली गरेपछि राष्ट्रवादी हुने सोच छ । यसैको परिणाम स्वरुप मधेसलाई त्यो दृष्टिकोणले सोचिएको हो । मधेस आन्दोलनलाई पनि भारतीय आन्दोलन भनिहाल्ने प्रचलन छ । मधेसीलाई पनि भारतीय भन्ने र मागहरूलाई नाजायज ठान्ने चलन छ । मधेसीले सीमा अवरोध गर्दा भारतले गरिदियो भन्ने । सरकार प्रमुख केपी ओलीले नै खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाए । खोक्रो राष्ट्रवादको अफिमको गोली जनतालाई खुवाइयो ।
राष्ट्रवादको कुरा उठाएर पहाडीबाट मधेसीलाई गाली गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरियो । दाउराले चुलो जलाउँछु तर मधेसको कुरो सुन्दिनँसम्म भनियो । आफ्नै दाजुभाइको कुरा नसुन्ने अवस्थामा पुर्याइयो । एकातिर दाजुभाइ अधिकारका लागि आन्दोलनमा उत्रिए, कतिले ज्यान गुमाए र ४० दिनसम्म काठमाडौंले नसुनेपछि नाकामा गए । त्यो सब सरकारलाई दबाब दिन गरिएको थियो । तर दुर्भाग्य नाकाबन्दी सफल हुन सकेन । वीरगन्ज नाका जो हाम्रो जिम्मामा थियो, त्यो पूर्ण सफल भयो । अरु नाका बन्दै हुन सकेन । वीरगन्ज नाकाबाट सामान नआएपछि सबैले मलाई नै गाली गरे । ‘राजेन्द्र महतोले नै नाकाबन्दी गर्यो’ भनियो । जब कि त्यो मधेसी मोर्चाको निर्णय थियो । त्यो निर्णय मैले लागू गराएको हुँ । मैले आन्दोलनलाई टिकाएको हुँ । मेची महाकालीसम्म दौडिने मै हुँ । लाठी खाने मै हुँ । ज्यानको बाजी पनि लगाएको हुँ । आन्दोलनमा जनता लाठी खाने, नेताचाहिँ काठमाडौं बसेर चिया–कफी खाने ? त्यसरी आन्दोलन हुन्छ ?
विखण्डन र साम्प्रदायिकता हामीलाई स्वीकार्य छैन । हाम्रो आन्दोलनले विखण्डनलाई स्विकार गर्न सक्दैन । यो आन्दोलन राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पार्नका लागि भइरहेको छ । जनता अधिकारसम्पन्न भए भने देश बलियो हुन्छ ।
उसो भए, काठमाडौंमा कफी खाँदै मधेस आन्दोलन घोषणा गर्ने नेता को हुन् ?
त्यो त जनताले देखिसके, चिनेका पनि होलान् । तिनीहरूले नै यो आन्दोलनमा मलाई गाली गर्न लगाए । तर नाकाबन्दी जनतालाई दुःख दिनका लागि गरिएको थिएन । हामीले सरकारलाई दुःख दिन गरेको हो । तर त्यो अवस्थामा पुगेपछि नाकाबन्दी खोल्नुपर्छ भनेर मैले नै पहिलोपटक भनेको हुँ । सबै नाकाबन्द भए पो सरकारलाई दबाब पथ्र्यो । तर सरकारलाई कुनै दुःख भएन । जनतालाई मात्रै पीडा भयो । मेरो नियत जनतालाई दुःख दिने थिएन ।
मधेस आन्दोलनले जनतालाई दुःख मात्रै पुगेको निष्कर्ष हो ?
खोक्रो राष्ट्रवादीहरूले लगाउने आरोप हो यो । तर, जनतालाई सुख, शान्ति, समान हक दिने सरकारले हो, त्यो नभएपछि आन्दोलन हुन्छ । आन्दोलनले जनतालाई दुःख पुग्ने अवस्था आएपछि सरकारले सोच्नुपर्छ । आन्दोलन पनि जनताले नै गर्ने हो ।
तर, सरकारले जनताको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्यो, जसले गर्दा जनताले नै दुःख पाउने अवस्था आयो । समग्रमा यही हाम्रा लागि दुर्भाग्य भयो । जनतालाई पीडा हुँदा नदुख्ने सरकार सच्चा सरकार हुन सक्दैन । जनताको दुःख आफ्नो नठान्ने गैरजिम्मेवार शासक हुनु नै नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य हो । सबै कुरा आन्दोलनकारीलाई आरोप लगाउने चलन छ । दुनियाँमा यस्तो हुँदैन । सरकार भनेको जनताको दुःख र पीडाका लागि हो । आन्दोलनकारी होस् या आन्दोलनबाट प्रभावित जनता हुन्, उनीहरूको दुःख हरण गर्नका लागि सरकार बनेको हुन्छ । यो सरकारले त आन्दोलन गर्ने जनतालाई पनि र आन्दोलनबाट पीडित जनतालाई पनि आफ्नो जनता ठानेन, त्यस अर्थमा आफूलाई उभ्यायो ।
नाकाबन्दी खुलेको तीन महिना भयो, अझै किन पाइएन इन्धन ? यसबाटै पुष्टि हुन्छ, यहाँ कस्तो सरकार छ भन्ने ।
यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ । नाकाबन्दी गर्दा हामीलाई गाली गरियो । अहिले कसलाई गाली गर्ने ? मलाई गाली गर्ने कि यो सरकारलाई ?
यो कुरा जनताले बिस्तारै बुझ्नेछन् । यो नालायक सरकारले आफ्नो नालायकीपन लुकाउन खोक्रो राष्ट्रवादको नारा अगाडि ल्यायो । अहिले कसले नाकाबन्दी गरेको छ र ? तर जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।
यो आन्दोलनमा भारतको अलिबढी नै सद्भाव थियो भन्ने घटना क्रमले देखाएको छ, किन भारत यसरी आयो ?
विगत पनि हेर्नुपर्छ, भारतको समर्थनबिना नेपालमा कुन आन्दोलन पूर्ण भएको छ र ? भारतले जहिले पनि नेपाली जनताको साथमा हुन्छु भनेर भनिरहेको छ । भारत नेपाली शासकभन्दा पनि जनतासँग उभिएको हुन्छ भनेर उसले दाबी गरेको छ ।
भारत मात्रै होइन, दुनियाँका सबै राष्ट्र यो आन्दोलनको पक्षमा छन् । हामीले सबै ठाउँमा हारगुहार गरेका थियौं । अधिकार माग्दा हामीलाई गोली चलाइयो भनेर सबै ठाउँमा पुग्यौं । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा छाती र निधारमा गोली खानुपर्ने हामी कस्तो राज्यमा छौं ? दुनियाँले हाम्रो कुरा सुन्यो, युएनले विज्ञप्ति निकाल्यो, अमेरिकाले समर्थन गर्‍यो, युरोपिएन युनियनका मुलुकले विज्ञप्ति निकाले र छिमेकी भारतले पनि स्वाभाविक रुपमा समर्थन गरेको हो ।
विगत पनि हेर्नुपर्छ, भारतको समर्थनबिना नेपालमा कुन आन्दोलन पूर्ण भएको छ र ? भारतले जहिले पनि नेपाली जनताको साथमा हुन्छु भनेर भनिरहेको छ । भारत नेपाली शासकभन्दा पनि जनतासँग उभिएको हुन्छ भनेर उसले दाबी गरेको छ । जब–जब नेपाली जनता आन्दोलन गर्छन्, भारत साथमा रहन्छ । विगतमा जति आन्दोलनहरू भए भारतको भूमिका रहँदै आएको छ । मधेसी जनता पनि नेपाली हुन् । उसले गरेको आन्दोलनमा भारत आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन । त्यसमा पनि सीमाना खुला छ, नेपालमा शान्ति स्थिरता भएन भने उसलाई सीधा असर गर्छ । त्यसैले पनि मधेसमा घनघोर आन्दोलन भइरहँदा भारत आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन । त्यसैले दुनियाँको समर्थन भएको मधेस आन्दोलनमा भारतको समर्थन हुनु नौलो होइन । दुनियाँको समर्थनबिना नेपालमा कुनै पनि आन्दोलन सफल भएको छैन ।
पटक–पटकका आन्दोलनसँगै मधेसमा विखण्डनका स्वर पनि सुनिए, सिके राउतजस्ता व्यक्तिहरू सतहमा देखिए, कहाँनेर कमजोरी भयो ?
तपाईंले जुन पात्रको नाम भन्नुभयो, त्यसमा हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन ।
विखण्डन र साम्प्रदायिकता हामीलाई स्वीकार्य छैन । हाम्रो आन्दोलनले विखण्डनलाई स्विकार गर्न सक्दैन । यो आन्दोलन राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पार्नका लागि भइरहेको छ । जनता अधिकारसम्पन्न भए भने देश बलियो हुन्छ । अधिकार पाएनन् भने तपाईंले भन्नुभएका नाम स्थापित हुँदै जानेछन् । त्यो ‘स्पेस’ दिनुहुँदैन । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।
आज मधेसमा विखण्डनको स्वर सुनियो भने भोलि लिम्बुवान, खम्बुवानमा सुनिएला । यो स्पेस कसैले पनि नपाओस् । त्यसका लागि जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । हाम्रो आन्दोलन विखण्डनका विरुद्ध हो ।
पुनः नाकाबन्दी गर्ने वा नगर्ने पछि थाहा होला ।आन्दोलन गर्दै जाँदा हामी कहाँ पुग्छौं, त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर सबै आन्दोलन काठमाडौंमा मात्रै सफल भएका छन् । आन्दोलन देशैभरि भए पनि केन्द्रबिन्दु सिंहदरबारलाई बनाउने हो ।
यहाँहरूले सरकारसँग के सम्झौता गरेर आन्दोलन रोक्नुभयो ? फेरि किन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ?
आन्दोलन लामो समयसम्म एकै रुपमा रहन सक्दैन । ६ महिनासम्म बन्द–हडताल सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरकारले छिटै आन्दोलन रोक्न आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने हो ।
भारतमा आजादीको आन्दोलन हुँदा ९० वर्ष लागेको थियो । त्योबीचमा सयौँपटक आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन भएको थियो । त्यसैले मधेसको आन्दोलन पनि लामो आन्दोलन हो । जो एकै ढंगबाट अगाडि जान सक्दैन थियो । त्यसैले शक्ति सञ्चयका लागि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका हौं । हामीले जनताको सुझाव मानेका हौं । बन्द–हड्ताल र नाकाबन्दीलाई परिवर्तन गरेर सामान्य तरिकाले अगाडि बढेका हौं । सरकारलाई पनि सहज वातावरण दिएका हौँ । यो सहज वातावरणको सदुपयोग गरेर सरकारले हाम्रो माग पूरा गरोस् ।
हामीले लिखित रुपमा दिएका थियौं, चैत्रभित्र सम्बोधन भएन भने वैशाखबाट आन्दोलन गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थियौं । तर सरकारले सुनुवाई गरेन, त्यसैले आन्दोलन अब सुरु हुँदै छ । आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन । हामी राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्नेछौं ।
अबको आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?
यो आन्दोलन बिल्कुल शान्तिपूर्ण र काठमाडौंकेन्द्रित हुनेछ ।
फेरि नाकाबन्दसम्म पुग्नु त हुन्न नि ?
त्यो पछि थाहा होला । आन्दोलन गर्दै जाँदा हामी कहाँ पुग्छौं, त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर सबै आन्दोलन काठमाडौंमा मात्रै सफल भएका छन् । आन्दोलन देशैभरि भए पनि केन्द्रबिन्दु सिंहदरबारलाई बनाउने हो ।
कर्मचारीबारे लालबाबु पण्डितको खुलाशा : सरकारी कार्यलय भित्रैबाट चल्छन् ‘कन्सल्टेन्सी’ !
पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रशासनीक सुधारका लागि ऐतिहासिक कामहरु गरे । पण्डितले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेपछि डिभि र ...
‘आम युवाको चरित्र उपभोक्तावादी बन्दै गएको छ , यो निकै नै डरलाग्दो कुरा हो’
साहित्यकार विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ नेपाली समाजमा स्थापित भनिएका सोच र मान्यताहरु भन्दा भिन्न धारणा राख्छन् । मानिसका जीवन, समाज र ...
‘डल्लाकोटी सरकारको आदेश’ : त्रिशुली किनारमा महल बनाउँनेलाई १ लाख जरिवाना (अन्तर्वार्ता)
धादिङको रोराङ गाउँपालिकामा यतिबेला एउटा शब्द चर्चामा छ,‘डल्लाकोटी सरकार’ । गाउँपालिका अध्यक्ष ‘हरि डल्लाकोटी’ नेतृत्वको स्थानिय सरकार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका ...
श्याम राउत पक्राउ प्रकरणको भित्री कथा : डिएसपी कुमुद ढुङ्गेलले यसरी पक्राउ गरे ‘अपराधी’
‘मैले प्रशासन सबैको अनुहार हेरेको छु । सबै डिएसपी त्यस्तो नहुँदो रहेछ । मेरो बच्चाको आँशुले उहाँलाई जनमजनम राम्रो होस्’ ...
प्रचण्ड सरकारले डेढ करोड अनुदान दिने भएपछि महावीर पुन भन्छन्,‘सद्भावको लागि धन्यवाद, म सरकारको ढोकामा जाँदैन’
काठमाडौं । सरकारले म्यागासेसे पुरस्कार बिजेता बैज्ञानिक महाविर पुनलाई डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने विषयमा छलफल अघि बढेपनि महावीर भने ...
सर्वोच्च अदालतले ‘नवराज सिलवाललाई आइजिपी बनाऊ’ भनेर कहाँ भनेको छ ?
सरकारले गरेको प्रहरी प्रमुखको नियुक्तीलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि प्रहरीमा थप अन्यौलता छाएको छ । सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी ...
दोहोरो गोली हानाहानमा एक प्यालेस्टाइनीको मृत्यु
जेरुसेलम, २३ फागुन । रमाल्लाहको वेस्ट बैंक सिटीका आइतबार राति इजरायली सैनिकसँग भएको दोहोरो गोली हानाहानमा परी एक प्यालेटाइनीको मृत्यु ...
‘लोडसेडिङ देखाएर करोडौं कमाउने कर्मचारी को–को थिए ? Exlusive खुलासा…
काठमाडौं, २८ पुस । वर्षौंदेखि नेपाली जनता लोडसेडिङ झेल्दै आएका थिए । तर, यसवर्ष सरकार परिवर्तन भएसँगै काठमाडौं पोखरा सहितका ...
मिरा राई भन्छिन्,–‘मलाई जिताउँन अभियान चलाउँनेहरु देखेर खुसीको आँशु झर्छ’
विश्व चर्चित टेलिभिजन नेशनल जियोग्राफीले वर्षैपिच्छे प्रदान गर्दै आएको विश्वभरिका साहासिक उत्कृष्ट १० व्यक्तिको २०१६ सूचीमा परेकी मीरा राई नेपालीहरूकाे ...